Magacyada Siyaasiyiinta ka qaybgaleysa shirka Asmara
Wararkii: Sept 6, 2007
Dadka Soomaaliyeed ee ku nool Dibadaha oo la sheegay in ay bixinayaa qarashka shirka Asmara..
Ergadii Puntland ee ka qaybgashay shirkii Muqdisho oo tilmaantay in aan wax natiijo ah ka soo bixin shirkaasi
Isbitaalka dhimirka ee Xabeeb “Waa Isbitaal wax badan u qabtay Ummadda Soomaaliyeed”
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dagaal shalay ka dhacay daafaha Suuqa Bakaaraha
Qaraxyo xalay laga maqlay Magaalada Muqdisho
Waxaa Magaalada Asmara ee dalka Ereteriya maanta ka furmaya shir ay isugu imaanayaan ilaa iyo 500 oo ergo, waxaana shirkaasi soo qaban-qaabiyey Siyaasiyiin Soomaaliyeed.
Magaalada Asmara oo maalmahan xarun u ahayd Maxaakiimta Islaamiga ah iyo Baarlamaanka isku magacabay inay xor yihiin ayaa waxaa la sheegay in Magaalada Asmara ay gaareen Siyaasiyiin si aad ah looga yaqaano dalka gudihiisa iyo Dibaddiisa, waxayna inoo sheegay dadkaasi halkaasi ku sugan in siyaasiyiinta ilaa iyo hadda soo gaartay ay ka mid yihiin Cumar Xaaji Masale, Faarax Weheliye Caddow Sindiko, Cusmaan Max’ed Jeelle, Max’ed Goodax Barre, Cabdi Ismaaciil Samatar, Jaamac Max’ed Qaalib iyo siyiyiin kale, sidoo kale waxaa halkaasi ku sugan Guddoomiyaha Baarlamaanka xorta ah Shariif Xasan Sheekh Aadan, iyo xildhibaanada ay ka mid yihiin Suleymaan Colaad Rooble, Sakariye Xaaji Max’ed, Axmed Diiriye Max’ed, Fawsiyo Max’ed Sheekh, Maxamuud Jaamac Sifir, Xuseen Max’ed Faarax (Caydiid), Cumar Xaashi Aadan, halka Maxaakiimta iyana halkaasi ku sugan yihiin Guddoomiyihii Maxaakiimta Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Prof Ibraahim Xasan Caddow.
Maalintii shalay ahayd ayaa waxaa Asmara kulan ku yeeshay ergayda ka qaybgaleysa shirka iyo Midowga Yurub, waxaana kulankaasi looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha Soomaaliya, iyo sidii Midowga Yurub uga qayb-qaadan lahaa arrimaha Soomaaliya, waxaana la filayaa in Mas’uuliyiinta Midowga ka qaybgalaan shirka maanta ka furmaya Magaalada Asmara.
Iyadoo lagu wado maanta in uu Magaalada Asmara ku furmo shir dib u heshiisiin ah oo ay isugu imaanayaana qaar ka mid ah Maxaakiimta Islaamiga ah, xubnaha labaxay Baarlamaanka xorta ah iyo siyaasiyiin iyo waliba aqoonyahano ayaa waxaa shirkaasi ku baxaya qarash aad u fara badan.
Warar aanu helnay ayaa waxay sheegayaan in qarashka shirkaasi ku baxa xooggiisa ay bixinayaan Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool Dibadaha, hase yeeshee dadka ka qaybgalaya ayaa iyagu iska bixinaya Tikidhada diyaradaha, blasé Hoteelada ayaa waxaa la sheegay in ay bixinayaan Jaaliyadaha Dibadda.
Ilaa iyo 250 xubnood oo ka socda Jaaliyadaha Dibadda ayaa la sheegayin ay ka qaybgalyaan shirkaasi, kuwaas oo isugu jira aqoonyaho, siyaasiyiin iyo waxgarad rag iyo haweenba leh. Dhawaan ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhamaaday shir dib u heshiisin oo lagu magacaabay shirka dib u heshiisiinta Beelaha Soomaaliyeed, hase yeeshee qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalay ayaa waxay qireen in shirkaasi aysan kasoo bixin wax natiijo ah.
Waxaa dhawaan Magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii Beelaha Soomaaliyeed, waxaana xiritaankiisa ka qaybgalay saddexda mas’uul ee ugu sareysa Dowladda Federaalka, waxayna sheegeenin shirkaasi uu ku dhamaaday si guul ah, hase yeeshee ergadii ka timid Puntland ayaa waxay sheegeenin shirkaasi aysan ka soo bixin wax natiijo ah, marka laga reebo sacad iyo isbarasho.
“Waxaana qirayaa shirka in aysan ka soo bixin wax natiijo ah oo anfaca Bulshada Soomaaliyeed oo aan ka aheyn in la is bartay iyo waliba in sacab lagu ayido” ayuu yiri mid ka mid ah ergadii ka socotay Puntland oo sheegay in shirka loo baahnaa in uu heshiisiin dhab ah dhex dhigo Bulshada Soomaaliyeed, sidoo kale waxa uu sheegay in xitaa la diiday in ay is arkaan Beelaha Soomaaliyeed ee horey dirirtu u dhex martay.
Isku soo wada duuboo ergadii Puntland waxay sheegeen in xitaa gunooyinkii loogu talagalay ergooyinka ka qaybgalayey shirka aan la siin marka laga reebo beelaha qaar oo la siiyey.
Mar aan booqanay labada Isbitaal ee qaabilsan Cudurada Dhimirka ee Habeb Public Mental Hospital, ayaan waxaan ku aragnay dad fara badan oo Isbitaalkaasi lagu daweynayo.
Mar aan la kulanay maamulaha Isbitaalka Kalkaaliye Sare C/raxmaan Cali Cawaale Xabeeb, waxa uu inoo sheegay in labada isbitaal ay ku jiraan dad gaaraya 120 qofood oo qaba cudurada dhimirka, waxaa kale oo uu sheegay in Isbitaalka intii uu jiray ay dad badan ku caafimaadeen, maantana ay hawlahoodii dib ugu laabteen.
“Dad badan ayaanu ka soo uruurinay dariiqyada Magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay Maskaxda wax uga dhinaayeen, maanta waa kuwo caafimaad qaba” ayuu yiri C/raxmaan Cali Cawaale oo sheegay in labadaan Isbitaal ay qaabilsan yihiin dadka ku nool gobalada dhexe ilaa iyo koonfurta Soomaaliya, isagoo sheegay in maalin walba ay isbitaalka soo booqdaan dad aad u fara badan.
Intii aan isbitaalka booqaneynay waxaan ku aragnay dad ay silsilado ku xiran yihiin, waxayna dhaqaatiirtu xiligaasi ku hawlanaayeen daaweynta dadkaasi.
C/raxmaan Cali Cawaale (Xabeeb), waxa uu inool sheegay in labada isbitaal daawooyinkooda ay bixiyaan Hay’adda WHO, waxa uuna u mahadceliyey Hay’addaasi oo uu ku timaamay inay wax kala qaybatay bukaanka qaba cudurada Dhimirka, waxaa kale oo uu u mahadceliyay Jaaliyadda Isboortiga ee wadanka Ingiriiska oo uu sheegay in ay isbitaalka ugu deeqdeen ilaa iyo 500 oo Doolar, isagoo sheegay in lacagtaasi ay wax ugu qabteen Bukuunada ku jira labada Isbitaal.
Kalkaaliye Sare Xabeeb waxa uu u soo jeediyey Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Di badaha in ay taakuleyn u fidayaan dadkaasi ku jira labada Isbitaal ee qaba cudurada dhimirka.
Aasaaskii Isbitaalkaani waxa uu ahaa mid uu dadaal u galay Mudane Xabeeb, waxa uuna dadaalkaasi keenay in uu maanta hawlgeliyo labo Isbitaal oo lagu daweeyo cudurada Maskaxda.
Waxaa shalay dagaal gacanta la iskula tagay ka dhacay deegaano ku dhow dhow suuqa weyn ee Bakaaraha, waxa uuna dagaalkaasi u dhexeeyey Ciidamada Dowladda iyo Kooxo ka soo horjeeday, waxa uuna dagaalkaasi bilowday markii ciidamadu isku gadaameen guri ku yaala agagaarka Suuqa Bakaaraha oo lagu tuhunsanaa in uu ku sugnaa mid ka mid ah kooxaha ay Ciidamadu ku tilmaameen kuwa qaska ka wada Magaalada Muqdisho.
Markii ay ku dhawaadeen Gurigii ayaa waxaa lagu bilaabay rasaas iyo qaraxyo taasina waxay keentay in labada dhinacba ay dirsadaan gurmad xoogan, dagaalkiina waxa uu ku sii balaartay deegaano kale oo suuqa Bakaaraha ku dhow.
Dagalkaasi waxaa ku geeriyooday dad gaaraya 10 qofood, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 35 qofood oo la dhigay Isbitaalada Madiina iyo Keydsanay.
Guriga raggii ku jiray ayaa waxaa la sheegay in ay halkaasi ka baxsadeen, waxaana lagu waramay in gurigaasi uu gaaray waxyeelo, iyadoo dadka qaar noo sheegeen in laga dhacay hanti isugu jirta lacag iyo Moobeelo.
Xalay fiidnimadii ayaa Magaalada Muqdisho waxaa laga maqlay qaraxyo iyo israaseyn u dhexeysay Ciidamada Dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda.
Qaraxyadaasi ayaa intooda badan ka dhacay Isgoyska Bakaaraha kadib markii ciidamo halkaasi marayey weerar lagu soo qaaday.
Waqtiga oo habeen ahaa ayay noo suurtageliwaysay in aan helno qasaaraha kala gaaray labada dhinac, waxayn weeraradaani daba socdeen dagaal shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho oo a ku dhinteen dad gaaraya 10 qofood, iyadoo ay ku dhaawacmeen 30 kale, waxaana sidoo kale la qabqabtay ilaa iyo 100 qofood oo loo taxaabay xabsiga CID-da
Shirkii Asmara oo maanta ka furmaya dalka Ereteriya
Waxaa maanta la filayaa in uu magaalada Asmara ka furmo shir ay isugu imaanayaan Maxaakiimta Islaamiga, Baarlamaanka Xorta ah iyo Siyaasiyiin iyo aqoonyahano kale oo la sheegay in ay ka imaanayaan dalka gudihiisa iyo Dibaddiisa.
Shirkaan ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ka qaybgalayaan ilaa iyo 500 oo ergo, waxaana ugu muhiimsan oo looga hadlayaa sidii ciidamada Itoobiya looga saari lahaa wadanka Soomaaliya.
Warar ayaa waxay sheegayaan in shirkaani ka qaybgalayaan ergooyin ka socda Qaramada Midoobey, Jaamacadda Carabta, Midowga Yurub, Midowga Afrika, IGAD iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 6, 2007
Prof. Ibraahim Caddow "Inta badan Madaxdii Maxaakiimta waxay ku sugan yihiin Muqdisho"
.Ilaa iyo 500 oo ergo oo ka qaybgaleysa shirka Asmara..
.Baarlamaanka oo ku kala qaybsamay u yeerida Max’edDheere
.Xarunta Ismaaciil Jimcaale oo cambaareysay xadgudubyadii
.Beesha Reer Xaaji Suleymaan oo la kulantay C/llaahi Yuusuf
.Cadde Gaabow “Dowladdu waa in ka fiirsataa waxyaabaha..
.Cutubyo Ciidamo Itoobiyaan ah oo Dhuusamareeb gaaray
. Maxaabiistii laga soo qabtey Farshabeello G/ Sanaag..
. Dagaallo dhex maray gumatysiga iyo CWXO.
Wararka oo dhan ka akhri halkan..... Sept 5